Oovimba beTrx - Iphepha lesi-3 kwelesi-3
Uhlalutyo lwamaxabiso eTRON- Februwari 26
I-TRON's (i-TRXI-mainnet iyaqhubeka nokusilela ngokwentengiselwano, njengoko iBinance Smart Chain (BSC) ibetha izigidi ezi-2.7 ngeeyure ezingama-24 nje.
Ukuqonda okungcono, i-Ethereum (ETH) ine-1.2 yezigidi zentengiselwano. Ukungena kwabasebenzisi kwi-BSC kunokwenzeka ngenxa yemirhumo ephantsi enikezelwa liqonga, elenza ukuba kube lula ukwenza ukuthengiselana.
Kwi-BSC, abasebenzisi bayacelwa ukuba benze iintlawulo besebenzisa iBinance Coin (BNB), ethe yonyusa ixabiso lemali ekuthengiswa ngayo kwimarike. Okwangoku, utshintshiselwano (i-Binance) ikwarekhoda malunga ne- $ 1 yezigidigidi kumthamo wokuthengisa mihla le.
Kwelinye icala, sele ingaphezulu konyaka ukusungulwa kwe-mainnet ye-TRON, kodwa inethiwekhi yathatha iintsuku ezingama-417 ukurekhoda ukuthengiselana kwayo kwezigidi eziyi-3.5. Ukwenza iakhawunti kwi-mainnet ye-TRON kulula. Ukufikeleleka ngokulula ngaphambili kwabangela inkxalabo malunga nokuba zingaphi kwezi akhawunti zazingadibananga nabantu bokwenyani.
Nangona kunjalo, i-TRON's DeFi ecosystem isebenza kakuhle kwaye ngoku idlulile kuqikelelo lwe- $ 5.7 yezigidigidi.
Ngaphandle kokukhula okuqinisekileyo kwinethiwekhi ye-ecosystem, ixabiso le-cryptocurrency yalo yemveli (TRX) kunzima ukuyibonisa ukukhula. Nangona kunjalo, abathanda i-TRON bakholelwa ukuba olu luphawu lokuba imeko esisiseko yenethiwekhi iqinile, kodwa okwangoku ayizukuqwalaselwa luluntu lwe-cryptocurrency ngokubanzi.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-ngoFebruwari 26
I-TRX ihlala ikwimowudi ye-bearish njengoko yonke imakethi yemali ye-cryptocurrency irekhode ingozi yesibini kule veki. Silindele ukuba i-cryptocurrency iququzelele isaphulelo esijikeleze inkxaso ye-0.0412 yeedola kwi-0.0500 yeedola kwiintsuku ezizayo. Kwicala leflip, ikhefu elizinzileyo elingaphantsi kwenkxaso ye- $ 0.0400 ayinakulindeleka okwangoku.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.0461, $ 0.0500, kunye ne- $ 0.0514. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0412, $ 0.0350, kunye ne- $ 0.0300.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.42 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 3.2 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.2%
tags Cryptocurrency, TRON, TRX
Ngaba utyale imali kumathuba anqabileyo kakhulu ebomini?
Ukuhlaziywa: 22 Februwari 2021
I-Altcoins elandelayo ye "Buzz Word"
Kwinyanga ephelileyo, iBloomberg Galaxy Crypto Index yayikwi1414.37, ilandela iphantsi nge-217.82 ekuqaleni kuka-Matshi. I-BTC yenze phezulu phezulu izolo nge-51,630.86 yeedola. Namhlanje (ngoFebruwari 17) kwaye isalathiso sasikwimi-2,295.61. Esi sisibonelelo esikhulu senyanga enye.
Makhe ndibeke oku. Ekupheleni konyaka ka-2017, ndathi ii-cryptoassets zezona zazinenguqulelo enkulu yeziko ukusukela ngoHlaziyo lwezoShishino kwaye babonisa utyalomali lobomi bonke. Amaziko, nangona kunjalo, ebengakulungelanga okanye bekwazi ukuthatha inxaxheba kolovukelo ngoko ke "bapholisa". I-SEC igqibe kwelokuba uninzi lwee-altcoins zezokhuseleko ezithi zibangele ukuba kubekho imarike enkulu yeebhere. Ukuphela kwe-2018, i-cryptos yayifumene ne-85% yokwehla kwaye i-BTC yabetha ixabiso eliphantsi le- $ 3,236.76 nge-15 kaDisemba ngo-2018. Kodwa ke jonga okwenzekileyo.
I-BTC inyuke nge-92.71% kwi-2019
Yayiphezulu ngama-305.94% ngo-2020
Kwaye ingama-75.42% kwiintsuku ezingaphantsi kwama-50 ngowama-2021….
Ndathini ngo-2018? Kwakukho ixesha ukusuka ku-Okthobha ukuya kuNovemba kunyaka ophelileyo xa ndenza ngaphezulu kwe- $ 3 yezigidi kwiiveki ezisi-7. I-Cryptos lutyalomali lobomi bonke.
Ngelixa i-BTC inokuphinda inyuke ngeshumi ngokuhamba kwexesha, ndiyathandabuza ukuba izakuhamba ngaphezulu kwe- $ 10 kulo nyaka…. Kodwa ithuba lobomi alikapheli kuba ngoku ii-altcoins ziqala ukuhamba. Nayi imizekelo embalwa, kwaye le yintshukumo nje ngo-100,000.
Kwaye khumbula ezo nzuzo zisukela kwiintsuku ezingama-48 zowe-2021….
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha.
Ndicinga ukuba zininzi ii-altcoins ezinokunyuka ngamatyeli ali-10 okanye nangaphezulu ngethuba elinye lowama-2021. kuchacha…
I-BTC inyuke nge-92.7% kwi-2019, i-305.94% kwi-2020, kwaye kwiiveki zokuqala ezintandathu ze-2021, inyuke nge-74.22%. Masikuthelekise oko nolunye uthango ngokuchasene ne-USD kunye nentlekele, igolide. IGolide inyuke ngama-20.94% ngo-2019, yenyuka nge-18.32% ngo-2020, kwaye yehle ngo-5.1% ukuza kuthi ga ngo-2021. Indlela yokhuseleko ngoku yi-BTC.
Igolide inezihlandlo ezimalunga ne-10 ngaphezulu kwekephu yentengiso kunee-cryptos ngoku (nangona ii-cryptos ngoku zingaphaya kwetriliyoni zexesha lokuqala). Ukuba yonke imali egolide iye kwi-BTC, ixabiso le-BTC liya kuba malunga ne-1 yeedola…
Abantu bathetha malunga ne-BTC eguqukayo kwaye inobungozi. Kodwa ungayifumana phi into eyenze ngaphezulu kweepesenti ezili-1,000 kwiminyaka emi-3 kule minyaka ili-11 idlulileyo, ngaphezulu kwe-100% kwayisibhozo, kwaye kwaba neminyaka emibini kuphela yokulahleka? Inye kuphela enye indawo ngaphandle kwe-BTC naphina kufutshane nokusebenza ngokulinganayo- ezinye iicryptassets.
Ukuba ubuyithengile i-BTC ekuqaleni kuka-2012 (ewe, hayi kwasekuqaleni), ngewawuguqule i-1,000 7.1 leedola yaba ngaphezulu kwe-4.5 yezigidi zeedola (inyuka nge-XNUMX yeedola kwinyanga ephelileyo)…
Khumbula ezi ziipesenti zeentsuku ezingama-30. Le yeyona ntengiso ilula inokubakho yokwenza imali eninzi. Unako, nangona kunjalo, ngokungena nje ngokulula kwisikhundla kwaye kwangoko unokwehla okungama-25 %- okunokubangela ukuba uphume kwaye uphulukane neenzuzo ezintle. Ukuba awunazo iinkolelo eziqinileyo malunga ne-cryptos njengam, i-crypto volatility iya kukuvavanya…
Le ncwadana ayenzi zindululo malunga ne-cryptos kodwa iyinkonzo yasimahla… Mna ngokobuqu ndinezikhundla kuninzi lwee-cryptos ezichazwe kule ncwadana yeendaba.
umbhali: UVan K. Tharp, PhD
Qaphela: Eli nqaku lakhutshwa kwaye lancitshiswa kuhlaziyo lwenyanga lwe-cryptos nguGqirha Van Tharp. Inqaku elipheleleyo linokufumaneka apha.
tags Ii-asethi zeCryptos, amathuba otyalo mali, Uhlaziyo kwiiCryptos
I-Tron Yandisa Ubukho Bayo kwi-DeFi Ngokubambisana ne-Reef Finance
Ukuhlaziywa: 19 Februwari 2021
I-Reef Finance, iqonga elinqamlezileyo leqonga leDeFi, ibhengeze ukuba iseke ubambiswano lobuchule kunye neTron (TRX) ukwakha indalo yayo yeDeFi. Umbutho kunye neTron uza kunceda abasebenzisi beMali yeReef ukuba bafumane ukufikelela ngokuthe ngqo kwizicelo zeDron's zeTron kunye neTRC-20 ngeqonga.
I-Reef Finance ibonelela ngesihlanganisi sobukrelekrele obukrelekrele kunye nenjini yejenreyitha kwaye yasungulwa ngoDisemba wonyaka ophelileyo kwiBinance Launchpool. Iqonga likwakhiwe phezu kwalo IPolkadot (DOT), ngaloo ndlela kuxhaswa amandla e-DeFi.
Oko bekuthethileyo, ukusebenzisana kuya kunceda iReef idibane kakuhle neetoni zeTron-20 zeTron zokusetyenziswa kweDeFi, kubandakanya ukuboleka kunye nokuboleka. Ingqonyela ye-Reef Finance, u-Denko Mancheski, uthethe ngokudityaniswa kutsha nje, wakuqaphela oko “Obu budlelwane noTron lulwandiso lweenzame zikaReef zokusebenzisana nabadlali abakhulu behlabathi leDeFi. Ukubonelela ngamathuba ezivunyiweyo ezihamba phambili kumaqonga e-DeFi aphantsi kophahla olunye kunye nokuseka iqonga njengeyona ndlela elula yokungena kwi-DeFi. ”
I-Tron, eyona mali inkulu yamashumi amabini ananye ngobukhulu bemarike, iseyinto entsha kwindawo ephambili yeDeFi. Inkampani ixhase ezinye zeeprojekthi zayo ezikhokelayo ezinje ngo-JUST kunye ne-JustLend ukukhulisa amathemba abo okutsiba kuloliwe waseDeFi. Oko kwathethiyo, uTron usekuqhubekeni kobambiswano oluphambili lweDeFi, kwaye sinokubona ukusebenzisana ngakumbi kwiiveki ezizayo.
Amanqanaba aphambili e-TRX ukuba abukele-ngoFebruwari 19
I-TRX okwangoku ithengisa ngamandla amakhulu kakhulu ekhwele kumaza asandula ukwenzeka Bitcoin spike. I-cryptocurrency irekhode ixesha elitsha lonke elijikeleze i- $ 0.6482 kwangoko namhlanje, ithumela ngaphezulu kwe-21% kwinzuzo evela kumhla wayo ophantsi. Nangona kunjalo, imali yedijithali irekhodishe ukulungiswa ngokuthobekileyo kwezi yure zimbalwa zidlulileyo ukuya kwi- $ 0.6000 yenkxaso yezengqondo, apho kungoku nje idibanisa khona.
Oko kwathethi, silindele ukuba inkxaso ye-0.6000 yeedola isebenze njengendawo ebuyayo ye-TRX kwiiyure okanye kwiintsuku ezizayo, ngokunokwenzeka zithathe ixabiso kwi-ATH yangaphambili nangaphezulu.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.0648, $ 0.0700, kunye ne- $ 0.0750. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0600, $ 0.0556, kunye ne- $ 0.0514.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.63 zezigidi
Ukuthengiswa kwemali kwiTron: $ 4.4 billion
Ukulawulwa kweTron: 0.27%
← Entsha izithuba 1 2 3abaDala izithuba →